Khabiirka Xoogsatada ah wuxuu qeexayaa 10 dariiqo lagu hirgelinayo Qalabka Calaamadaha Webka
hababka lagu fulinayo hawl gaar ah. Waa baaxad aad u sareysa oo leh horumar firfircoon, bilowga hindisaha iyo caqabadaha caanka ah ee ka jira sirdoonka caannimada, isdhexgalka dadka-kombiyuutarka, iyo habka qoraalka. Qalabka ee shabakadda ee qalabku soo dejiyo, soo dejiyo oo soo saaro xogta la doortay, oo ku siinaya qaabab la jecelyahay. Qalab kala duwan ayaa kuu ogolaanaya inaad xog ururiso boqolaal ilaa kun oo URL ah mudo sanado ah. Halkan waxaa ku yaal siyaabo aad u isticmaali kartid aaladaha qashinka shabakada.
1. Mawduucyada iyo Raacayaasha
Bandhiga 'tartanka' iyo 'profile social media' waa meel fiican oo lagu falanqeynayo waxyaabaha. Laga yaabee, waxay albaabada u furi doontaa inaad isticmaasho farsamooyinka casriga ah iyo dhisida aasaaska ganacsiyadaada ganacsigaaga. Waxa kale oo aad ku arki kartaa inta qof ee ay haystaan ​​iyo inta dad ah ay dib u eegayaan oo jecel yihiin boggooda. Xogta si fiican loo soo saaro waxay kaa caawin kartaa inaad aruuriso macluumaadka ku saabsan tartameedkaada, adoo siinaya asxaabtaada badan ee warbaahinta bulshada iyo baabuur badan oo baabuur wata website-kaaga.
Sawir fiican ayaa kaa caawin doona, lagu ogaanayo, xoqin karo, iyo helitaanka macluumaadka bogagga internetka ee kala duwan. Waxaan si sahlan ugu hayn karnaa faraheena ku dhufo garaacidda tartamayaasheena waxayna helayaan fikrad ah badeecadahooda, ololayaasha xayeysiinta, blogs posts, iyo xeeladaha suuq-geynta. Iyada oo xogta si fiican loo xoqay, waxaan hagaajin karnaa xeeladaha suuqgeynta ee nooca isbeddelkani iyo isbeddelkaan ayaa hubaal ka dhigi doona ganacsigeena.
Waxaad xoqin kartaa macluumaad faa'iido leh oo ka socda Yelp, Google, Trustpilot, TripAdvisor, Zomato, Amazon iyo Yahoo sida shirkadaha waaweyn si aad u aragto sida macaamiisha ayaa dib u eegay. U diyaari goobaha warbaahinta bulshada oo raadi noocyada ama alaabooyinka si aad u hesho macluumaad faa'iido leh in la xoqo. Macluumaadka la xoqay ayaa loo isticmaali karaa si looga faa'iideysto daciifnimada, cabashooyinka, iyo arimaha.
4. Qiimaha qiimaha
Waxaad xoqin kartaa xogta qiimaha isbarbardhigga iyo raadinta. Waxaa muhiim ah in la ogaado waxa ay tartamayaashu ku soo dallacayaan badeecad gaar ah iyo inta badeecooyin ee taxanaha isku mid ah ay ku jiraan boggooda internetka. Isbarbardhiga qiimaha ayaa muhiim u ah tafaariiqda internetka, iyo xogta la xoqay ayaa ah habka kaliya ee lagu qiimeeyo qiimaha si habboon. Tusaale ahaan, silsiladaha dukaamada dukaamada (Sainsbury, Waitrose, iyo Tesco) waxay isticmaalaan shabakadda webka iyagoo ah qayb ka mid ah istaraatijiyadaha sicirka..Waxay xoqaan walxo badan maalin kasta waxayna isticmaalaan macluumaadkaan si ay isbarbardhigaan qiimaha alaabadooda kala duwan.
5. Raadinta Mashiinka Raadinta
Gaadiidka soo socda ee goobta wuxuu ku yimaadaa waddooyin kala duwan, sida gaadiidka mushaarka, gaadiidka warbaahinta bulshada, emails, diritaan iyo kuwo kale. Qaar badan oo naga mid ah, waa raadinta dabiiciga ah oo u adeegta xayeysiis weyn oo loo yaqaan 'pie'. Laakiin kuwa kale, gawaaridan micnaheedu maaha waxna waxay diiradda saaraan raadinta moobiilka oo ka badan istaraatiijiyad kasta.
6. Cilmi-baarista suuqa
Dhamaan ganacsadaha waxay og yihiin in cilmi-baaristu ay qayb muhiim ah ka tahay ganacsiga. Waa inaad hubisaa fursadaha, isbeddelka, iyo hanjabaadaha iyadoo la adeegsanayo cilmibaarista suuqa. Marka xogta laga tirtiro goobaha tartamayaasha, dhammaan macluumaadka si sahlan ayaa loo helaa, waxaadna heli kartaa fikrad ah sida loo kobciyo ganacsigaaga cilmi baaris ku haboon. Sawirada webka waxay soo saari karaan xogta lagama maarmaanka ah ee shirkadaha cilmi-baarista suuqa, bixiyeyaasha falanqaynta, buug-yaraha internetka, website-yada wararka iyo blogyada warshadaha. Waxaad ka faa'iideysan kartaa xogtan oo aad ballaarin kartaa shabakadaada adduunka.
7. Dhaqdhaqaaqa Shaqo iyo Shaqaaleynta
Haddii aad raadinayso shaqo cusub, waa inaad xoqdaa dhowr keli ah guddoomiyeyaasha shaqada, goobaha warbaahinta bulshada, iyo forumyada. Waxa kale oo aad ka heli kartaa macluumaad faa'iido leh oo ka socda goobaha barta casriga ah iyo liiska liiska. Haddii aad raadineyso musharixin ku habboon ururkiinna, waxaad u jeedin kartaa inaad xoqdo xogta oo aad kuhesho natiijooyinka ku salaysan shuruudahaaga. Si kastaba ha noqotee, qalabyada shabakada shabakadda waxay kaa heli doonaan macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan waxa ka dhacaya suuqa shaqada, sida loo shaqaaleeyo musharixiinta saxda ah iyo sida loo rabo shaqo riyo.
8. Adeegyada iyo Adeegyada
Dhammaanteen waxaan soo iibsanay alaab iyo adeegyo internetka. Macaamili ahaan, waxaan ka koobi karnaa nuqulo iyo isu-ururin kartaa wicitaannada si aan u helno macluumaad faa'iido leh. Waxaan sidoo kale isbarbar dhigi karnaa qiimaha iyo dib u eegista si aan u ogaano nooca iyo adeegyada ay ku habboon yihiin. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa liistada baabuurta la isticmaalo ee u dhigma shuruudahaaga ka imanaya goobo kala duwan. Haddii kale, waxaad ka hubin kartaa dib u eegista telefoonada kala duwan si aad u aragto fikradda nooca calaamad u leh dadka kale. Qaar ka mid ah xulashooyinka ugu caansan waa iPhone, Windows Mobile, iyo BlackBerry. Qorsheynta Maaliyadeed
Qalabyada shabakadda ee qashinka, waxaad xoqin kartaa xogta laga helo goobaha sarrifka, suuqyada hantida, iyo hubi dib u eegista goobaha kala duwan. ee faa'iidooyinka dhaqaale. Waxay kuu fududeyneysaa inaad ururiso faahfaahinta aad u baahan tahay si aad u hesho ogeysiis ku saabsan suuq-geynta suuqa.
10. Raadinta iibsashada ama kirada
Si aad u hesho fikrad wanaagsan oo ku saabsan duuduubka webka, waa inaad tixgelisaa hay'adaha guryaha ee guryaha. Haddii aad raadineyso inaad iibsato ama wax ijaarato, waxaad hubaal ahaan u baahan tahay inaad xoqdo xogta oo aad fikrad ka haysato nooca hanti ee aad ugu habboon tahay. Maadaama ay tahay ugaadhsiga guriga, waxaad abuuri kartaa xog ururin si fiican u qaabeysan oo ka socda wakiilada kala duwan, liiska, goobaha qulqulka Source .